Phakathi pathologies eziyingozi kakhulu zokuphefumula wokuphila emkhakheni wamuva wezokwelapha ubiza i-pneumonia. Minyaka yonke emhlabeni bazokufa bebulawa yilesi sifo, izinkulungwane zabantu. Ngenxa yalesi sizathu, ososayensi bekwi yokusesha kwemithi emisha, kanye ngenkuthalo ekuthuthukiseni base inkinga kusenesikhathi futhi olunembile lesi sifo.
Kuyinto izifo ezithathelwanayo kanye ukuvuvukala esithinta bulimaza imigudu yokuphefumula kubantu, ikakhulukazi emaphashini. Abangobhongoza kukhona nezilwanyana ezincane pathogenic (amagciwane, isikhunta). Kuye kwasendaweni, lwegciwane, izimbangela kanye ngobucayi zokugula ukuhlukanisa izinhlobo: Alopecia, lobar, segmental nemaphakathi (basal) i-pneumonia. thina sihlolisise ne zenyathi yokugcina.
Amagciwane kanye trigger
focus ukuvuvukala waphawula endaweni basal yamaphaphu. Kwenzeka ekuqongeleleni ketshezi engxenyeni esibulalayo ye-apharathasi (alveoli), ukuphazamiseka kwengqondo negesi lokushintshisana ngegazi capillary nokushintsha isitho yangaphakathi ezicutshini. Isizathu salokhu nezilwanyana ezincane ngokuya webhaktheriya akhiwe ngaphakathi ulwelwesi cell (mycoplasma, Umkhuhlane amagciwane, i-chlamydia pneumoniae).
inyumoniya Central, isithombe uvezwa impahla, kunzima ukuxilonga. izici Epidemiological nale ukuvuvukala imnene, ngakho kuhlolwe ngamehlo ubonisa imiphumela. Ukuhlolisisa ngokuphelele, okuzokwenza futhi ekuvezeni obala trigger. Ngokwesayensi kungase kutholakale ukuthi ingozi yesifo kubangele miphumela elandelayo:
- umonakalo, ukulimala kanye nemihuzuko thorax ;
- engumlutha wotshwala nokubhema;
- izifo concomitant yezitho zangaphakathi;
- nokwelashwa ngamakhemikhali;
- ukupholisa ngemishini;
- zokuphefumula ipheshana ukugula.
Abantu abaningi wadalula ukutheleleka immunocompromised (izingane, asebekhulile, abantu sengqondo engazinzile futhi nezibi). Amagciwane angena emzimbeni ngokusebenzisa imigudu yokuphefumula, begijima ngqo oketshezini olungenambala lwegazi futhi amashubhu bronchial. amagciwane Pathogenic bagcwalise alveoli, breaking ukusebenza negesi lokushintshisana futhi ukudluliswa oxygen. Ngenxa yalokho, kukhona onamandla ukukhwehlela, imfiva kanye ngokushesha eziwohlokayo isimo jikelele. microflora Pathogenic zisakazekela uhlelo lymph, owayephethe lesi simo.
Ngokusho kochwepheshe a pneumonia central (isithombe esihlokweni sifanekise zako) kungakheka kunoma unesimila ifomu ukuvuvukala. Esimweni sokuqala ukuba waphawula ebukhali. Ifomu wesibili eziyinkimbinkimbi ngokwengeziwe, ingxenye olukhulu yamaphaphu imbozwe zokwakheka inamagquma, lesi sifo nzima yokwelapha.
Kuzo zombili lezi zimo, ngelashwa lide kakhulu. Kungakhathaliseki ifomu kudala kwesifuba, amakhwela imisindo ku thorax futhi ukuphefumula bronchial basal nenyumoniya. Izimpawu ngezinye izikhathi kudidaniswe umdlavuza nesifo sofuba.
Kuvele udokotela isipiliyoni nokuqeqeshwa ubona zokugula ukuphefumula okusheshayo, iphika, ukuntuleka komoya-mpilo, ukujuluka anda nesiyezi kanye ukuzikhandla omncane. Kulokhu, akukho ubuhlungu esifubeni umoya. lokushisa umzimba ayikwazi ukukhushulwa. Kahle ukuxilonga izifo futhi kusize okwasekhaya esihlalweni x-reyi futhi behlolwa indlela (ukulalela umsindo).
Sifo Nocwaningo Izindlela
Ngu kuhlolwe ngamehlo akunakwenzeka ukuxilonga "nenyumoniya basal", ngakho ngo ukuhlolwa kwegazi emitholampilo ezisiza nokubona izinto ezingase zibe lwegciwane. Ngezinye ukuphakama ezimhlophe cell segazi bangakhuluma obenesifo. Futhi kuthathwe ukuhlaziywa kwamakhemikhali nocwaningo wenziwa negesi lokushintshisana in ama-capillary.
Siyaphenya isikhwehlela etholwe ngesikhathi expectoration, futhi lwahlolwa endaweni yokucwaninga microbiology. Uma kudingeka, udokotela wakho angase afeze izivivinyo ezengeziwe: I-CT scan, umchamo, bronchoscopy, biopsy yamaphaphu futhi pleura. Ukuhunyushwa Imiphumela ivumela kahle ukwabela yokwelapha neyamukelekayo ngempumelelo.
inyumoniya Basal zidinga esibhedlela eMnyangweni Pulmonology noma ukwelashwa. In esigabeni oyingozi, isiguli enqunyiwe embhedeni ukuphumula, amaningi iziphuzo efudumele, uhlobo olukhethekile lokudla, ahlanganiswe amaminerali namavithamini. ingxenye okuphoqelekile ukwelapha ngemithi elwa namagciwane, okuyinto abakhethiwe udokotela ngemva kokuthatha cwaningo kudingekile ukuhlonza izimbangela futhi ugxile kwasendaweni. Aqokwe izidakamizwa ngemithambo yegazi noma intramuscularly, ngezilinganiso ngabanye okufanele iminyaka.
Hhayi ukwelashwa okuphelele okungenalo immunostimulant, eqeda ukuvuvukala, expectorant nezidakamizwa mucolytic, ngcono amanzi umsebenzi bronchi. Ibonisa izinqubo Physiotherapy okuhloswe ngaso normalizing isimo samaphaphu izicubu (electrophoresis, ukwelashwa laser, amplipulse, UHF). Awu ukusiza ephefumula ephathwa inyumoniya futhi Physiotherapy. Ngo nzima wenziwa yokwelapha concomitant.
Engeziwe amakhambi ukwelashwa Folk
Phytoremedy Sebenzisa kuphela Kunconywa ngokuhlanganyela imithi. Amakhambi kanye amajikijolo nomphumela ozuzisayo phezu bronchi kanye okudambisa ukuvuvukala, sandla ukululama ngokushesha. Ukumnika elomile iwayini elibomvu futhi ihlathi nuts ukusiza ukuthuthukisa isikhwehlela khulula.
Kusukela esikhathini eside esidlule okhokho bethu esetshenziswa leresiphi therapy. abelaphi abaningi basaqhubeka belulekwa ukuyisebenzisa in iziguli kutholakala ukuthi uphethwe yini "i-pneumonia basal." Ukwelashwa Kwenziwa ngokusebenzisa kwangaphakathi. Lungiselela izidakamizwa yewayini elibomvu futhi nati iphathwa (isithako ngamunye ku 500 g.). Ikhambi Ngaleso refluxed ihora, selehlile futhi 15 ml isiphuzo amaminithi angu-10 ngaphambi kokudla.
Aloe noju - ikhambi for ukuvuvukala emaphashini
A iresiphi eside ziphumelela ibhalwe kanje: khama ngamaqabunga amasha enhlaba 200 ml ijusi, engeza gr 40. efihlekile birch (ngaphambili nepepper), futhi amaqabunga utshani feverweed. Ngokuphelele kuxutshwe, wafaka amafutha amakhilogramu mass propolis kanye imbali uju (liquid).
Thina efakwa okugeza amanzi tomim 10-15 imiz. Isipuni ziyoncibilika 250 ml yobisi olufudumele futhi kudle kathathu ngosuku kungakhathaliseki ngesidlo. Vegetable izidakamizwa ngcono isimo kanye nesifo.
inyumoniya Basal ngokushesha ukudlula uma uthatha: Peach isiphuzo. Lungiselela kuye ilula. It has umsebenzi eqeda ukuvuvukala futhi imithi elwa nawo. Ngezinye ingilazi yobisi ukuthatha amakhiwane amabili, khona-ke phezu ukushisa low imizuzu 10 futhi isiphuzo.
Badger amafutha - umsizi engcono ekulweni inyumoniya
Leli thuluzi kuzosiza unqobe ezihlukahlukene zomsebenzi isifo, ngisho olusindayo. Izifundo athathwe, ezinsukwini ezingu-30, bese ikhefu izinsuku ezingu-14, futhi ukwelashwa futhi uqaliswe kabusha. Nsuku zonke ukudla 15 amagremu. amafutha ngaphambi kokudla - kathathu ngosuku.
amakhambi abantu Ukwelashwa kufanele kwenziwe ngaphansi kokuqondisa okuqinile owelapha. Ngaphezu kwalokho, isiguli kumele alandele olukhethekile lokudla, give up the amnandi, okunamafutha, okunosawoti, ngibhema futhi okubabayo. Ukudla izingxenye ezincane, ukuphuza okungenani ezimbili amalitha amanzi ekamelweni lokushisa, ukusebenzisa fitonapitki uju, Linden, camomile okusajingijolo.
Ungalokothi baphathe abandayo kwi izinyawo, lokho kungase kubangele sengozini yokuthola izifo. Sikhuthaze izivikeli mzimba, lokhu kuzosiza imenyu enempilo futhi olinganiselayo, yokuphila asebenzayo, ukugwema imikhuba eyingozi. Okubaluleke ngendlela efanayo kuyinto indawo evumayo ngokomzwelo, zama ehlise, zisindise kusukela nezimo ezicindezelayo abantu ezimbi. Buciko imithetho elula ngeke ikuvikele zonke izinhlobo ukuvuvukala. Kuncono nohlakaniphe endleleni okubhekwa ngayo ukuphila kwakhe.
Ukwaphuka we scaphoid: Izimpawu kanye Ukwelashwa
Rheumatic isifo senhliziyo: Izimpawu kanye Ukwelashwa
Ukwelashwa tubootitis: kancane kancane ikhambi isifo
Nenshisekelo nenyumoniya: Izimbangela, Izimpawu, Sifo Nokuselapha
Yini ebangela nezinduna ongama, futhi njengoba kwenzeka
Parquet flooring i-ezingabizi intengo - laminate, ukubuyekezwa uqinisekise lesi
Kuyini i-transponder? Umgomo we operation futhi ububanzi
Fish Black: isithombe kanye nencazelo ethandwa kakhulu aquarium abakhileyo
High lesikhumba amabhuzu ngoba amadoda - lo mkhuba isizini
Indlela ukuhlobisa desktop yakho namanye aseduze?
Injani ukulungiswa we yangaphakathi omlilo injini umphini?
Vietnam ngo-February. Isimo sezulu, izibuyekezo holidaymakers
Umklami ingcaca yokumaketha yakho yedijithali - esiphuthumayo
Udayi Organic. izici Lesitshalo nokusebenzisa udayi
Yena alunywe lip wakhe: yini okufanele uyenze?
Abalingisi "Sin City" futhi indima angajwayelekile